Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Misokatra bebe kokoa i Thailand ao anatin'ny 3 herinandro
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Misokatra bebe kokoa any Thailand
Phuket mahita ny sehatra amin'ny fisokafan'ny toerana itodiana any Thailand hatramin'ny nanombohan'ny COVID-19 izay mampiasa ny programa fizahan-tany Sandbox ho mpitari-dalana azy.
Miaraka amin'ny Samui Plus sy ny programa 7 + 7 Extension, dia naneho fa sarobidy tokoa izany amin'ny famelomana indray ny fizahantany Thai.
Mpizahatany iraisam-pirenena maherin'ny 27,000 no nitsidika an'i Thailand teo ambanin'ny programa Phuket Sandbox, Samui Plus, ary programa 7 + 7 Extension.
Nisokatra tsikelikely tao amin'ny fizahan-tany i Thailand manomboka ny 1 Jolay 15 Jolay ary 16 Aogositra.
Amin'ny maha-toeram-piantsonana pilotan'ny fisokafana azy, ny Phuket Sandbox dia nandray mpitsidika 26,400 tao anatin'ny roa volana voalohany, nanomboka tamin'ny 1 Jolay ka hatramin'ny 31 Aogositra lasa teo, ka nahazoam-bola 1,634 tapitrisa Baht.
Ny karama dia 565 tapitrisa Baht amin'ny trano onenana, 376 tapitrisa Baht amin'ny fiantsenana sy fitsangantsanganana, 350 tapitrisa Baht amin'ny sakafo sy zava-pisotro, 229 tapitrisa Baht amin'ny serivisy ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana, ary 114 tapitrisa Baht amin'ny hafa. Ny salanisan'ny sakan'ny fitsangantsanganan'ny mpitsidika an'i Phuket tamin'ny Jolay-Aogositra dia 61,894 Baht, raha 58,982 Baht no voarakitra tamin'ny Jolay.
The Sandbox PhuketNy tsena loharano dimy lehibe indrindra dia nijanona tany Etazonia tamin'ny fahatongavan'ny 3,482, narahin'i UK tamin'ny fahatongavany 3,351, Israel tamin'ny fahatongavan'ny 2,909 2,092, i Alemana niaraka tamin'ny 2,083 tonga, ary i Frantsa niaraka tamin'ireo olona XNUMX.
Vaksiny feno ary tsy mila quarantine, ireo tonga 26,400 XNUMX tonga tao Phuket tamin'ny sidina iraisam-pirenena mivantana izay tantanan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe avy amin'ny teboka manerantany. Anisan'izany Thai Airways International avy any Copenhagen, Frankfurt, Paris, London, ary Zurich; Etihad Airways avy any Abu Dhabi; Qatar Airways avy any Doha; EL AL Israel Airlines avy any Tel Aviv; Cathay Pacific avy any Hong Kong; Emirates avy any Dubai, ary Singapore Airlines avy any Singapore.
Ireo fahatongavana ireo dia niteraka 366,971 alina tao amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny SHA Plus tao Phuket - 190,843 alina ny volana Jolay ary 176,128 95,997 alina ny volana Aogositra. Miaraka amin'ny 462,968 2021 alina isan'ny efitrano ao amin'ny boky mandritra ny volana septambra, ny totalin'ny telo volana amin'ny volana Jolay ka hatramin'ny septambra dia eo amin'ny 2022 efitrano alina. Raha mijery lavitra kokoa, ny totalin'ny totalin'ny efitrano fandraisam-bahiny mandritra ny vanim-potoana Oktobra 24,947 ka hatramin'ny febroary XNUMX dia XNUMX efitrano alina.
Ny mpizahatany an'i Phuket Sandbox dia takiana amin'ny alàlan'ny trano fandraisam-bahinin'ny SHA Plus ao Phuket hahazoana fiarovana fanampiny. Ny fanamarinana SHA Plus dia manondro ny hotely mahafeno ny fepetra fiarovana mba hifehezana ny COVID-19, ary koa farafahakeliny 70% amin'ireo mpiasa ao aminy no nanao vaksiny feno.
Ho fanampin'ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana ilaina ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena mitsidika, ny fandaharan'asan'ny vaksinin'i Phuket tamin'ny 31 Aogositra dia nahatratra 92% ny mponina teo an-toerana no nahazo ny fatra vaksiny voalohany, raha 75% no nahavita ny andiany roa fatra.
Filazana sonia ny faharoa amin'ny Destinatio any Thailandyns hanokafana indray ny fizahantany dia natomboka tamin'ny 15 Jolay ny programa Samui Plus, ahafahan'ny mpitsidika mitsidika an'i Ko Samui, Ko Pha-ngan ary Ko Tao. Azon'izy ireo atao izany amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana any Samui na, manomboka amin'ny 16 Aogositra, amin'ny alàlan'ny fandehanana any rehefa avy nijanona 7 alina teo ambanin'ny boaty Sandy Phuket, ny safidy farany izay mpitsidika 347 no nanao izany.
Tamin'ny volana sy tapany voalohany, nanomboka ny 15 Jolay ka hatramin'ny 31 Aogositra, nandray ny mpitsidika 918 ny fandaharana, miaraka amin'ny 6,329 alina misy efitrano, ka mitentina 37.6 tapitrisa Baht amin'ny fidiram-bola. Ny ankamaroan'ireo tonga ireo dia avy tany amin'ny firenena eropeana sy Etazonia.
Manampy amin'ny fanamorana ny programa ny sidina zotra Bangkok Airways miisa 92 misy tombo-kase eo anelanelan'ny Samui sy Bangkok ho an'ireo mpandeha transit / transfer mankany Samui Plus mampitohy ny renivohitra Thai. Ankoatr'izay, ny zotram-piaramanidina koa dia miasa sidina eo anelanelan'ny Phuket sy Samui ho an'ny mpitsidika avy amin'ny Phuket Sandbox.
Tamin'ny telovolana farany tamin'ity taona ity ka hatramin'ny 9 Desambra, Samui Plus dia nandrakitra an-tariby 9,195 alina tamin'ny boky avy amin'ny mpitsidika 860. Anisan'ireny ny efitrano fandraisam-bahiny 7,397 591 voatanisa mpitsidika 1,788 ambanin'ny Samui Plus sy efitrano fandraisam-bahiny 269 7 an'ny mpizahatany 7 ambanin'ny Phuket Sandbox sy XNUMX + XNUMX Extension.
Nalefa tamin'ny 16 Aogositra 2021, ny programa Phuket Sandbox 7 + 7 Extension no singa farany amin'ny 'Thailand Reopening' izay anomezan'ny mpizahatany fotoana bebe kokoa hitsidika toerana maro amin'ny fitsidihany ny firenena.
Ity programa ity dia ahafahan'ny mpandeha iraisampirenena mampihena ny fijanonana tsy maintsy atao any Phuket manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 7 alina, ary aorian'izay dia afaka mandany 7 alina any Krabi (any amin'ny toerana voatondro Ko Phi Phi, Ko Ngai, na Railay Beach), any Phang-Nga (amin'ny Khao Lak na Ko Yao), na amin'ny Surat Thani (ao amin'ny Ko Samui, Ko Pha-ngan, na Ko Tao).
Avy any Phuket, Samui, Surat Thani's, Ko Pha-ngan ary Ko Tao dia azo tratra amin'ny alàlan'ny sidina mivantana any Bangkok Airways avy any Phuket; Ny Ko Phi Phi, Ko Ngai ary ny Railay Beach an'i Krabi dia azon'ny serivisy sambo sy sambo voamarina SHA Plus avy amina seranana nankatoavina; Ny Khao Lak an'i Phang-Nga dia azo tratry ny serivisy famindrana fiara voamarina SHA Plus avy any Phuket, raha Ko Yao Noi na Ko Yao Yai dia tratra amin'ny alàlan'ny sambo sy sambo voamarina SHA Plus avy amina seranana nankatoavina.
Toerana ho avy ho avy hisokatra indray ho an'ireo mpizaha tany iraisam-pirenena vita vaksiny
Toerana maro hafa ahitana Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, ary Pattaya, no kasaina hisokatra manomboka amin'ny 1 Oktobra 2021.
Izany dia satria i Thailand dia nanohy nanao fandrosoana lehibe tamin'ny fanaovana vaksiny ny mponina ao amin'ny firenena, hatramin'ny nanombohan'ny fanaparitahana faobe tamin'ny 7 Jona.
Nanomboka tamin'ny 28 ka hatramin'ny 4 septambra 4, 2021 dia olona 9,879,371 19 25,104,942 nanerana ny firenena no vita vaksiny feno, na nahavita ny andiany roa fatra ho an'ny vaksinin'ny COVID-603,363, olona XNUMX hafa no nahazo ny fatra vaksininy voalohany, raha olona XNUMX XNUMX kosa efa nahazo ny fatra vaksininy fahatelo, hoy ny minisiteran'ny fahasalamam-bahoaka.